म्याकको साथ घर बाट काम गर्न महान अनुप्रयोगहरू म म्याकबाट हुँ
म्याकको साथ घरबाट काम गर्नको लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू
हामी संगरोधमा छौं। सम्पूर्ण स्पेन र विश्वको एक ठूलो भाग हाल सामना गरिरहेको छ कोरोनाभाइरस द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य संकट. कार्यस्थलमा लागू गरिएको उपायहरू मध्ये एक लचिलो घण्टा भएको छ र तपाई घरबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रदान गरिएको छ। यहाँ हामी तपाईंलाई केहि अनुप्रयोगहरू छोड्दछौं जसले गर्दा सबै चीज रेशममा जान्छ।
खैर। हामी ती सबै कामदारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं जसले आफ्नो घरबाट कार्यहरू जारी राख्न सक्दैनन् र नियमित रूपमा उनीहरूको कार्यस्थलमा जानु पर्छ। स्वास्थ्य, आपतकालिन, ट्रकहरू, डेलिभरी पुरुषहरू ...ती सबैलाई धन्यवाद!
1 तिनीहरूले मलाई काम गर्न घर पठाए। मसँग म्याक छ। केहि अनुप्रयोगहरू जुन म प्रयोग गर्न सक्छु?
1.1 अनलाइन बैठकहरू
1.1.1 iMessage र फेसटाइम
1.2 मैले ठूला र भारी फाइलहरू साझेदारी गर्नु पर्छ र iMessage वा स्ल्याकबाट, यो सक्दैन।
1.2.1 ड्रपबक्स, आईक्लाउड
1.3 संयुक्त परियोजना व्यवस्थापन
1.3.1 ट्रेलो, आसन, अरूहरू बीच
तिनीहरूले मलाई काम गर्न घर पठाए। मसँग म्याक छ। केहि अनुप्रयोगहरू जुन म प्रयोग गर्न सक्छु?
iMessage र फेसटाइम
हामी एप्पलको आफ्नै अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्छौं, जस्तै म्याकसेज र हाम्रो म्याकबाट फेसटाइम। हामी कुराकानी गर्न सक्छौं, या त व्यक्तिगत वा समूहमा, people२ जनासम्म र हामी जहिले पनि फाईल साझेदारी गर्न सक्दछौं। दिमागमा राख्नुहोस् कि यससँग अन्त-देखि-अन्त ईन्क्रिप्शन पनि छ, त्यसैले सञ्चारहरू सुरक्षित छन्।
यदि हामी एक कदम अगाडि जान चाहान्छौं भने हामी स्लेकलाई टाढैबाट काम गर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं। यसले समूह कलहरू र फाइलहरू साझा गर्ने सम्भावनालाई पनि अनुमति दिन्छ। हामी भन्छौं कि हामी एक कदम अगाडी जान सक्छौं, किनकि यो एकल अनुप्रयोग हो जुन अघिल्लो दुईलाई सँगै ल्याउँदछ। हामी सन्देशहरुमा एक अन्तरवार्ता पनि उल्लेख गर्न सक्छौं र केवल उसले सन्देश प्राप्त गर्दछ।
डेस्कटप को लागी सुस्तमुक्त
मैले ठूला र भारी फाइलहरू साझेदारी गर्नु पर्छ र iMessage वा स्ल्याकबाट, यो सक्दैन।
हामी मध्ये धेरैले जान्दछन् कि यो ड्रपबक्सको साथ काम गर्न कस्तो देखिन्छ। यद्यपि यसको मोबाइल प्रणालीको लागि यसको अनुप्रयोग छ, यो म्याकबाट धेरै उत्तम छ। तपाई ठूला फाईलहरू साझा गर्न सक्नुहुनेछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पादन अनुमति पनि दिन सक्नुहुनेछ जुन हामीले उचित ठान्छौं। कुनै ढाँचा र आकार साझा गर्न सकिन्छ। अवश्य पनि, तपाईले दिमागमा राख्नु पर्छ कि नि: शुल्क खातामा अधिकतम जीबीको क्षमता छ।
आईक्लाउड पनि धेरै व्यावहारिक हुन्छ जब यो कुनै पनि ढाँचा र आकारका फाइलहरू साझेदारी गर्न सक्षम हुन आउँदछ। यो यसको नि: शुल्क संस्करणमा सीमित पनि छ तर बदलामा हामी तपाइँको सामग्री को लागी एक एन्क्रिप्शन प्रणाली प्राप्त गर्छौं।
संयुक्त परियोजना व्यवस्थापन
ट्रेलो, आसन, अरूहरू बीच
घरबाट काम गर्नु पर्ने सबै व्यक्तिहरू बीच कार्यहरू व्यवस्थित गर्न हामी अनुप्रयोगहरू वा वेब पृष्ठहरूको ठूलो संख्या भेट्टाउँछौं। हामीले यी दुईलाई छनौट गरेका छौं, किनकि ती अति सहज र सरल देखिन्छन्।
ट्रेलोको म्याकको लागि आफ्नै अनुप्रयोग छ, तर तपाईं यसलाई वेब मार्फत पनि पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्यानलमा आधारित छ जहाँ कार्यहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा वा समूहहरूमा तोकिएउटाउन सकिन्छ। हामी टिप्समा नोटहरू, लि ,्कहरू, छविहरू र समाप्तिहरू राख्न सक्छौं। यो एकदम बहुमुखी छ र तपाईंले यसको ह्या hang्ग तत्काल पाउनुहुनेछ।
Asana लाई वेबको माध्यमबाट पहुँच गरिएको। धेरै ट्रेलो जस्तै, यसको एक विशेषता यो हो कि यसलाई तेस्रो-पक्ष सेवाहरूमा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक प्रोग्रामहरू » म्याक अनुप्रयोग स्टोर » म्याकको साथ घरबाट काम गर्नको लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू
एप्पल कार्डको मार्चमा अर्जित भुक्तानी स्थगित गरियो
रक्त सन्तृप्ति सेन्सर, एयरट्यागहरू र अधिक। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ